Parador de León, chishamiso cheSpanish Plateresque | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | tsika nemagariro, León
IParador de León iri mune chimwe chezvivakwa zvakanyanya zveguta reCastilian: iyo musangano weSan Marcos. Inowanikwa pamahombekombe e Rwizi rweBernesga, kwakatangira muzana ramakore rechiXNUMX, apo hostel yakavakwa kuti igare nevafambi vaienda Santiago de Compostela.
Nekudaro, chivakwa chatinoziva nhasi chakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX pamatongo eiyo yapfuura uye nekuda kwechipo kubva Ferdinand muKaturike. Chero zvazvingaitika, kana iwe ukagara kuParador de León, unenge uchinakidzwa neimwe yeiyo Spanish plateresque zvishongo. Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvirinani ichi chivakwa chishamiso, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Nhoroondo diki nezveParador de León
2 Zvikamu zvikuru zveParador de León
2.1 Iyo facade
2.4 Chikamu chakatemerwa kuParador de León
3 Zvishandiso zveconade yeSan Marcos
4 Nzira yekusvika sei kuParador de León
Nhoroondo diki nezveParador de León
Sezvatakakuudza, imba yemasangano yeSan Marcos yakagadzirirwa nekuda kwechipo kubva kuna Fernando de Aragón. Nekudaro, basa harina kutanga kusvika panguva yekutonga kwa Carlos Ini. Kuita kuvaka, vatatu vavaki vakahayiwa: Martin de Villarreal, uyo aizove ari pamusoro pechemberi; Juan de Orozco, ndiani aizoshanda muchechi, uye Juan de Badajoz Mudiki, ndiani angaronga sacristy neyeyekeya.
Kuvakwa kwenzvimbo yemonari yeSan Marcos kwakatora makore anopfuura zana, kuchipera nguva dzakatenderedza 1679. Zvisinei, yatove muzana regumi nemasere, kuwedzerwa kwakakosha kwechivakwa kwakaitwa kunobatanidza zvinowirirana nehumwe kuvaka.
Munyori weParador de León
Zvikamu zvikuru zveParador de León
Nzvimbo yemasangano yeSan Marcos ibwe rekuvaka. Sezvatataura, zvinofungidzirwa chimwe chezvivakwa zvakakosha zveSpanish Renaissance uye zvakare chishamiso chePlateresque. Kuti ndikutsanangurire iwe, zvakanakisa kuti tisiyanise zvikamu zvacho.
Chaizvo mukati maro iwe unogona kuona yakawanda ye Plateresque maficha zvechivakwa. Iwo ma pilasters, iwo muzinga unogumisa portal uye zvimwe zvinhu ndezve izvi zvetaera. Icho chivharo chekamwe kanivhasi ine maviri pasi ayo apedzwa mukati cresting. Yekutanga ine semi-denderedzwa windows, nepo yechipiri iine mabalkoni nemakoramu ane balustrades.
Iyo plinth yakashongedzwa nema medallion anomiririra mavara kubva kuGreco-Latin yekare pamwe nezvimwe zviratidzo zveSpanish nhoroondo. Kune iro chikamu, shongwe yemuzinda inosanganisira muchinjikwa weSantiago neshumba.
Kana iri kavha, inoshamisa chaizvo. Inoumbwa nemiviri miviri uye hukuru hwayo hukuru hwesemicircular uye yayo kiyi yakasimudzwa inomiririra Saint Mark. Yayo isina maturo ndeye baroque uye inosanganisira jasi remaoko eSantiago neiyo yeiyo Humambo hwaLeon.
Inosanganisira zvikamu zvina. Maviri acho akavakwa muzana ramakore rechi XNUMX nebasa, sezvatakakuudza, zve Juan de Badajoz Mudiki. Nekudaro, iwe unogona zvakare kuona bas-zororo nekuda kweanozivikanwa muFranco-Spanish muvezi Juan de Juni inomiririra Kuberekwa. Kune avo chikamu, zvimwe zvikamu zviviri zvakavakwa muzana regumi nemanomwe negumi nemasere emakore.
Chechi yeSan Marcos
Pakupedzisira, kereke inoumba chikamu chechitatu cheParador de León. Inopindura kunonoka kweSpanish Gothic, inonziwo Katurike Kings maitiro. Kuvakwa kwaro kwakapedzwa muna 1541, sezvinoratidzwa nerunyoro rwaunogona kuona mune niche pane iyo façade.
Iyo portal yetembere inopa a guru ribbed vault kwakapoteredzwa neshongwe mbiri. Iwe unogona zvakare kuona mairi zororo repamusoro zvakare nekuda kwe Juan de Juni, iyo inomiririra Kalvari uye neKuburuka.
Kune chikamu chayo, mukati mayo mune yakafara nave yakayambuka netansept ine mabara. Muchikamu chayo chikuru chearitari, iyo Annunciation uye iyo Apostolate inomira, zvese kubva muzana ramakore rechiXNUMX. Asi iwe unofanirwawo kutarisa iyo coro, kunyanya basa raJuni, kunyangwe chikamu chayo chepasi chiri kukonzerwa ne Guillermo Doncel.
Chikamu chakatemerwa kuParador de León
Kunyangwe isina hunyanzvi hwekukosha sezvikamu zvakapfuura, iyo yemakamuri eParador de León inewo zvinokwezva zvekupa. Pakati pavo iyo kuunganidzwa kwemachira, fenicha yekare uye zvakavezwa zvemuti. Asi, pamusoro pezvose, iyo mabasa emifananidzo iyo inoshongedza chivakwa uye izvo zviri nekuda kwevanyori vakaita se Lucio Munoz, Joaquin Vaquero Turcios o Alvaro Delgado Ramos.
Mukati meParador de León
Zvishandiso zveconade yeSan Marcos
Parizvino, musangano weSan Marcos, sezvatakataura, Parador de León. Nekudaro, nhoroondo yakave nekumwe kumwe kushandiswa. Pakutanga, yakavakwa se mapilgrim hospital uyo akaita iyo Camino de Santiago.
Asi, zvinosuruvarisa, kumwe kwekushandisa kwakadzokororwa kwenzvimbo yemasowe kwave kuri kwe jeri. Mariri munyori mukuru akapedza makore mana akasununguka Francisco de Quevedo nekuraira kwevane simba Verenga-Duke weOlivares. Yakawanda gare gare, panguva yeHondo Yenyika, yakashanda semusasa wevasungwa wevasungwa veRepublican.
Pakupedzisira, kumwe kushandiswa kwakapihwa Parador de León yazvino yaive imba yemamishinari yeSosaiti yaJesu, Hofisi Yemauto General Staff, chipatara chemujeri, nzvimbo yekudzidzisa uye kunyange chikoro chezvipfuyo.
Muna 1875, León City Council yaida kuiputsa, iyo ingadai yakave nhamo chaiyo kuSpain nhaka yehunyanzvi. Neraki, njere dzakakunda uye hadzina.
Nzira yekusvika sei kuParador de León
Kana iwe ukaenda kuguta reCastilian, tinokurudzira zvikuru kuti iwe ugare mune ino Plateresque kushamisika. Kamwe mukati León uye kusvika parador, chinhu chekutanga chaunofanira kuziva ndechekuti chiri mu St Mark's Square, padhuze nebhiriji risingazivikanwe.
Kutarisana neParador de León
Kana iwe uchifamba uchibva kuchamhembe, iwe uchasvika muguta ne A-66. Iwe unofanirwa kuisiya mu Mhandara yeNzira uye tora iyo N-120. Pane imwe nguva muguta, vese Avenida del Chiremba Fleming uye weVeterinary Fakitori vanokuendesa kuParador.
Kune rimwe divi, kana iwe uchiuya uchibva kumaodzanyemba, kumabvazuva kana kumadokero, pamwe unosvika muguta neguta LE-30 and the LE-20. Mune ino kesi, ingo tevera Avenida de Europa uyezve Avenida de la veterinary chikoro kusvika kuSan Marcos.
Mukupedzisa, iyo Parador de León kana Convent yeSan Marcos Icho chinoshamisa cheSpanish Plateresque uye chimwe chezviratidzo zveguta reCastilian. Icho chivakwa chine yakawandisa tsika senge nhoroondo mauri paunonzwa kutakurwa kuenda kune dzimwe nguva. Haudi here kusangana naye?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » León » Parador de León